OS X El Capitan 10.11.3 ၏နောက်ဆုံး version ကိုယခုရရှိနိုင်ပါပြီ ငါက Mac ပါ
OS X El Capitan 10.11.3 ၏နောက်ဆုံး version ကိုယခုရရှိနိုင်ပါပြီ
Jordi Gimenez | | Mac OS X ကို, OS X ကိုအယ်လ် Capitan
ဒီကနေ့ဟာအင်္ဂါနေ့ဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကတည်းက OS X ရဲ့ beta ဗားရှင်းတွေထွက်ကတည်းက Apple ကအခုမှထုတ်လွှင့်လိုက်တာပါ အသုံးပြုသူများအားလုံးကို OS X El Capitan 10.11.3 ၏တရားဝင် version သည် bug fixes နှင့် system ၏ဤ version တွင်အကောင်အထည်ဖော်သောအခြားတိုးတက်မှုများပါ ၀ င်သည်။
ထပ်မံ၍ Apple သည် iOS နှင့် OS X update ကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ထပ်မံဖြန့်ချိခဲ့သည်။ သို့သော်ယခုအချိန်အထိဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည်။ ငါရေးထားသည့်အတိုင်း watchOS နှင့် tvOS တို့၏ဗားရှင်း သို့သော်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်ပါသည်ဟုပြောနိုင်ပါပြီ OS X ကို 10.11.3 အယ်လ် Capitan များအတွက်တရားဝင် download.
ဒီဖြန့်ချိမှုမှာအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တဲ့တိုးတက်မှုတွေအတွက် Apple ရဲ့မှတ်စုများမှာစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုများ၊ အက်ပဲလ်အနေဖြင့် OS X ၏အသေးစိတ်ဗားရှင်းအသေးစိတ်ကိုသူတို့စတင်မိတ်ဆက်နေစဉ်တွင်ပင်ရှင်းပြခြင်းမပြုလုပ်ရန်ထုံးစံရှိသည် beta ဗားရှင်းများတွင်၎င်းကိုမသတ်မှတ်ပါ။
အရေးကြီးသည့်အချက်မှာလက်ရှိစနစ်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူအချို့ကတိုင်တန်းကြသည် ယခင်ဗားရှင်းနှင့်အတူ Mac ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်မမျှော်လင့်ဘဲ system crash, မျှော်လင့်ကြောင်းအပေါငျးတို့သဒီဗားရှင်းအတွက် fixed ဖြစ်ပါတယ်။
တိုက်ရိုက်ကိုဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည် Mac App Store> အသစ်ပြောင်းခြင်းများ။ ယခုအချိန်တွင် download လုပ်ရန်အချိန်အနည်းငယ်ကြာနိုင်ပြီးသုံးစွဲသူများက update လုပ်နေကြသည်။ သို့သော် Apple သည် tvOS နှင့် watchOS ဗားရှင်းအသစ်များကိုမဖွင့်တော့ဘဲ၎င်းသည်အရာအားလုံးကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပေးလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac OS X ကို » OS X ကိုအယ်လ် Capitan » OS X El Capitan 10.11.3 ၏နောက်ဆုံး version ကိုယခုရရှိနိုင်ပါပြီ
Enrique L ဟုသူကပြောသည်
ငါလုပ်နေပြီ၊ ငါမင်းရဲ့ခြေရာတိုင်းကိုလိုက်လျှောက်ပြီးပြproblemနာမရှိဘဲ update လုပ်နေတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်က PAGES ကိုငါဝယ်ပြီးပြီ။ ငါ KEYNOTE AND NUMBERS ကိုသာ update လုပ်လိမ့်မယ်။ ဒီအရာကမင်းကိုဒေါ်လာ ၅၀ နဲ့သိမ်းထားပြီးပြီ။ …အရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံနေတယ်၊ ​​ငါကစပိန်ဘာသာပြန်ပြီး Mac ကို restart လုပ်တဲ့အခါမှာ ၁၀၀% မှာ synchronized ဖြစ်သွားတယ်။ စမ်းသပ်မှုအဖြစ်အပျက်မှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာသိဖို့လား။ ၎င်းကိုဖျက်ပစ်ပါ၊ စွန့်ပစ်ပါ၊ သို့မဟုတ်ယခုဘာလုပ်ရမည်နည်း။
Enrique L ကိုစာပြန်ပါ
ငါက install လုပ်ပြီးပြproblemsနာတွေမရှိဘဲ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင် MS Outlook နှင့်သဟဇာတမဖြစ်ခြင်းသည်မဖြေရှင်းနိုင်သေးပါ။ ကြောင်းပြproblemနာနှင့်အတူအခြားမည်သူမဆို ?? ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ ??
တကယ်ကောင်းတဲ့ဗားရှင်းပဲ! ပထမဆုံးစာမျက်နှာကို ၀ င်လိုက်တာနဲ့သူတို့မကောင်းဘူး
မင်္ဂလာပါ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်၏ Macbook pro 10.11.3 သို့ ၁၀.၁၁.၃ ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပြီးကတည်းကကျွန်ုပ်၌ bug များစွာရှိသည်။ ပထမတစ်ခုမှာကွန်ပျူတာကိုဖွင့်သည့်အခါသတ္တုတွင်းဘေးမှ guest ည့်သည်အသုံးပြုသူ၏အသွင်အပြင်ဖြစ်သည်။ "System Preferences -> Users and Groups" ၌ပင် "Guest User" ကိုပိတ်ထားသည်။ ငါက activate လုပ်ပြီးပြန်ပိတ်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်ကွန်ပျူတာကိုငါစဖွင့်လိုက်ရင်အဲဒီမှာပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ အခြားမည်သူမဆိုဖြစ်ပျက်ခဲ့သလဲ မဆိုအကြံပြုချက်?
သူငယ်ချင်း၊ သင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြီးကြပ်သူအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ထားတာကိုသတိပြုမိသလား။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ သင်က authenticate မလုပ်ဘူးဆိုရင်၊ ပြောင်းလဲမှုတွေကိုမသိမ်းဆည်းနိုင်ဘူး (ဒီဟာကိုဘယ်ဘက်အောက်ပိုင်းမှာတွေ့ရတဲ့သော့ခတ်လေးတစ်ခုမှာပြုလုပ်သည်) ။ preferences ၀ င်းဒိုး၏)
အရှုပ်တော်ပုံအသစ်တစ်ခုကြောင့် Apple သည်၎င်း၏ဘက်ထရီများမှကိုဘော့နှင့်အက်စစ်ထွက်လာသည်